Iyo Hackney Horse uye hunhu hwake hwepamusoro trot | Noti Mahosi
IHackney Horse uye hunhu hwake hwepamusoro trot
Jenny monge | | Mabhiza, Mabhiza emhando
Rudzi rweHackney bhiza, rwunonziwo Norflok Trotter, nderwe british mavambo Hongu yakakosheswa nekuwanda kwayo kukuru. Zita rerudzi rwacho runobva pazwi reAnglo-Saxon hnegan, zvinoreva kuchema. Izwi iri raizobatana naNorman hacked iyo yaizosvika pakutorwa kweshoko rechiLatin equus. Nechekare musangano rerudzi urwu tinogona kutanga kuona zvekare zvekare. Izwi rekuti Hackney rakatonyorwa muzana ramakore regumi nemana muEngland.
Izvi zvakaenzana Ivo vanoonekwa pamusoro pezvose netroti yavanayo, yakakwidziridzwa uye yakasarudzika. Izvo chaizvo kubva pahunhu uhu iye akatora zita rake remadunhurirwa rekuti "The Aristocrat of Exhibitions." Tinovaziva zviri nani zvishoma here?
Rudzi rweHackney, nekuda kwekufamba kwavo trot uye nekutakura kwavo, vanozivikanwa pamatanho ekuratidzira, kumira kunze mune hitch mode. Mwanakomana equines neakakodzera aptitudes yeresresse, makwikwi uye kuratidzira. Naizvozvo, zviri nyore kuzviwana mune madhiri senge kusvetuka, dressage kana kuratidzira kupfura.
1 Chii chakaita bhiza raHackney?
2 Zvishoma zvenyu nhoroondo
2.1 Kuuya kweRailroad
Chii chakaita bhiza raHackney?
Nehurefu hwakatenderedza 155 cm, isu takatarisana nemabhiza akangwara uye anotyisa kwazvo. Unogona kuvaudza kuti ndizvo mabhiza ane simba ane chimiro chinoenderana. Mavari munomira wake inoshamisa trot: zvikuru kusimudza maoko avo uye tuck mune yekumashure zvakanyanya, kuita kutenderera kwakatenderedzwa. Iko kufambisa uku kwakavaita mukurumbira munyika yequine exhibition.
Ivo vane yakati diki, yakati wandei musoro une rectilinear mbiri, uko kune maziso maviri mahombe. Musoro wakashongedzwa nekorona diki, nzeve dzinofamba dzinogara dzichiita kunge dziri pane dzakangwarira. Mutsipa wayo wakareba uye wakakombama uye unotungamira kumapfudzi akasimba uye chipfuva chakafara.
Mutumbi werudzi urwu wakanyanya compact uye yakaumbwa zvakanaka. Ine musana musana, yakatenderera mbabvu uye rump.
Makumbo ayo ari pakati nepakati uye akapedzwa mukati dzakakomberedzwa uye dzakaoma kesi. Ane mhasuru yakawanda mumashure ake nemabvi akareba, akaumbwa zvakanaka,
Yaro silky fur kazhinji ine matanda chestnuts, chestnuts, rima chestnuts kana chestnuts, iyo yekupedzisira ichinyanya kuwanikwa. Mumazana emakore ekutanga erudzi, nhema Tobiano uye mavara Tobiano capes aigona kuwanikwawo, kunyangwe nhasi zvave kutsakatika.
Pakati pezana regumi nemapfumbamwe uye kutanga kwemakumi maviri emakore, madema, piebald uye chestnut mavara majasi akasarudzwa, zvakanyanya kukodzera kutarisa mota. Semuenzaniso, akareruka mavara senge chestnut, goridhe chestnut, tsvuku chestnut yaingoonekwa zvakanaka kusvika masikati.
Sekuda kuziva, kune zvekare Hackney Poni (iine hurefu pakasvava ingangoita gumi nemana makumi masere nemana masendimita. Mavari, chiito chakatenderedzwa chetrot chakanyanya kudomwa, sezvavanosimudza mabvi uye vachidhonza yekumashure nenzira yekuti zvipenga zvipfuure pasi pemuviri.
Muzana ramakore rechiXNUMX England, vafudzi vemabhiza vaitaridza kunge vaifarira kutsvaga kuti nderipi rakanakisa bhiza re trotter. Chinangwa ichi chaive chekuvhara maresi ake akakurumbira echiChirungu nematrotting maharoni. Pakati pezana rino uye rinotevera, hwaro hwakaiswa kune mazhinji eanonyanya kutariswa marudzi eBritish nhasi. Zvese zvibereko zvevashandi vevafudzi, avo vakawana zvakanyanyisa marekodhi emarudzi ezvitsuwa.
Rudzi rweHackney rwakadaro rwakasimuka mukati Great Britain muzana remakore rechiXNUMX. Kunyangwe pakutanga ivo vaishandiswa zvakanyanya sebhiza rinodhonzwa nemabhiza echigaroNhasi tinogona kuzviwana mune yakakura nhamba yeanokwenenzvera maitiro. Zvese nekuda kwekuita kwakawanda.
Bhiza rekutanga rerudzi urwu rakazvarwa muNorfolk (England) muna 1760. Kubva panguva iyoyo uye nekutenda kumabhiza ekutsika-tsika eNorfolk neYorkshire, aya maequine matsva aivandudza uye achiwana hunhu hwavo kusvika vaita rudzi rwavo.
Pakati pemadzitateguru erudzi Hackney padivi rababa, tinogona kuwana Rudzi Rwakakwana kubva kuDarley Arabian mutsara. Pakazosvika 1797, mutambo wekutsika wakange wakabatanidzwa zvakanyanya muhupenyu hweChirungu. Mares ane ma gaits akadaro aikosheswa kwazvo. Ivo vaviri uye maresi epaketi bhiza dzakasiyana siyana dzaishandiswa nevafudzi kusimbisa hunhu hweHackney yenguva yacho.
Yakava yakakosha kwazvo mhando. Yaive imwe yeiyo Chigaro chemabhiza chinodiwa pakati pevakadzi nekuda kwetoti yake. Kubva pakupera kwezana remakore rechiXNUMX uye pakati pehafu yekutanga yezana ramakore rechiXNUMX, rudzi urwu rwaishandiswa zvakanyanya sebhiza rechigaro. Zvakare zvakanyanya kukosheswa kune echinyakare kumhanya nhangemutange.
Yadzo chaiyo inokurumidza trot uye chiito chakavaita vanoyemurwa kwazvo mabhiza. Izvi zvakaburitsa izvo Vanochengeta mabhiza vekuNorth America vakasarudza rudzi urwu kuti vavandudze yavo hunhu hweyakareruka hunhu.
Mumazana emakore aya, nharaunda yekurima yakawana bhiza rinobatsira mumhando yeHackney. Pamusoro pekushanda sebhiza rechigaro, aigona kutarisira purazi pane dzimwe nguva.
Nekugadzirwa kwenjanji mujaho weHackney waive munjodzi. Vanhu vakatanga kuona kuti kwaive kumhanya kufamba nechitima pane kutasva bhiza. Njanji munguva pfupi yakatsiva basa rakaitwa nenhamba huru yemabhiza ekutsika. Vazhinji vafudzi vakafunga kuti zera remabhiza rakange ratopfuura nekusingaperi uye vakarega kuita basa rekuberekesa. Zvisinei, iyo Hackney Horse Society yakafamba nekukurumidza uye akanunura mujaho weHackney nekuwana kukosha kwayo kune mamwe mabasa. Rudzi urwu rwaiwana vateveri vakaona aya equine se mabhiza akanakisa ezororo. Yakanga iri poindi yakanaka mukufarira rudzi rwekuti panguva iyoyo kuravira kwemabhiza nehurefu uye kutaridzika kwakanaka kwakatanga kubuda. Naizvozvo, vamwe vafudzi vakatarisa panzira iyoyo. Mukurumbira weBritish Hackney wakatanga kupararira pasirese.
Kupfuuridza nguva, Iko rudzi rwakakura mumhando, kuwana nekusimbisa hunhu iyo nhasi inomiririra. Kuti uite izvi, muHackneyney genetics, madzinza mazhinji akabatanidzwa equines. Mamwe ndeaya: maNorfolk neYorkshire anomhanyisa mabhiza, maFriesian, maNormans, maGalloways uye kunyangwe maAndalusians.
Ndinovimba iwe wakanakidzwa nekuverenga ichi chinyorwa zvakanyanya sekuita kwandakaita kuchinyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti mabhiza » Mabhiza » IHackney Horse uye hunhu hwake hwepamusoro trot
Ndatenda zvikuru nekugovana ruzivo urwu. Ini ndinozviwana ndiri kunyora ngano pamusoro peaya maequines, kusimudzira kweEquestrian Tourism, mushure mekuongorora phenotypes uye ma centaurs akabhururuka pamisana yavo. Tsika yekuenzana munyika yega yega yakakura.
Pindura kuna jaime
Dhizaina mabhiza uye avo anomiririra mhando